News - ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်း
လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံ၏ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလားအလာသည်တရုတ်၏စီးပွားရေးအခြေအနေကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ စက်မှုအပြင်အဆင်ညှိနှိုင်းခြင်း၊ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းမှအမြတ်အစွန်းကျဆင်းခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းစက်ရုံများမှထွက်ခွာခြင်းပြtheနာကိုဖြေရှင်းရန်မည်မျှလိုအပ်သည်ကိုခန့်မှန်းထားသည်။ အကြပ်အတည်း။ နောင်အနာဂတ်တွင်ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းသည်မည်သည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဦး တည်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်၊ မည်သည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကိုပြသမည်၊
စက်မှုလုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းသည်“ ၅ နှစ်တာကာလတစ်ကြိမ်ပြောင်းလဲခြင်း” ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်အရအဓိကထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းကုမ္ပဏီများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းသည်လာမည့် ၅ နှစ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံ၏ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးစက်ရုံများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဦး တည်ရာစျေးကွက်အလားအလာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်စစ်တမ်းအစီရင်ခံစာ - တရုတ်ကုမ္ပဏီများ၏ကုန်ကျစရိတ်များမြင့်တက်နေသော်လည်းဈေးကွက်အရောင်းအမြတ်သည်သမိုင်းတွင်အနိမ့်ဆုံးသို့ကျဆင်းခဲ့သည်
ယှဉ်ပြိုင်မှုအားသာချက်မရှိခြင်းကြောင့်အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်ရောင်းအားဈေးကွက်တွင်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရေးအတွက်စျေးနှုန်းယှဉ်ပြိုင်မှုကိုတိုက်လှန်ကြသည်။ အသေးစားနှင့်အလတ်စားထုပ်ပိုးပုံနှိပ်ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏စတိုးဆိုင်များကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပြီးရောင်းအားတက်နေသဖြင့်ရောင်းအားဈေးကွက်မှနှုတ်ထွက်နေကြသည် ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ကျဆင်းနေအမြတ်အစွန်း။
လူသားအရင်းအနှီး၏ကုန်ကျစရိတ်မြင့်တက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ပိုမိုမြင့်မားသောလုပ်အားခများမခံလိုပါကကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတိုးမြှင့်ရမည်။
အဓိကသော့ချက်ကတော့ကုမ္ပဏီရဲ့စက်ယန္တရားကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ စက်ယန္တရားများနှင့်စက်ပစ္စည်းများနှင့်နည်းပညာများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်လူသားအရင်းအနှီးကိုသင့်လျော်သောအရင်းအနှီးထိုးဆေးဖြင့်အစားထိုးခြင်းသည်အနာဂတ် ဦး တည်ချက်ဖြစ်သည်။
တရုတ်သည်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကိုလက်ရှိအဆင့်တွင်တွေ့ရသောကြောင့်စက်ပစ္စည်းနှင့်ကိရိယာများ၏စျေးကွက်ပေါက်စျေးမှာအတော်လေးနိမ့်သည်။ စက်ပစ္စည်းများနှင့်စက်ပစ္စည်းများဖြင့်အလုပ်သမားများနေရာတွင်အစားထိုးခြင်းသည်အဓိကအားဖြင့်ခွဲဝေချထားမှုအတွက်ကာလတိုတိုးတက်မှုဖြစ်သည်။ သို့သော်စက်ယန္တရားနှင့်စက်ပစ္စည်းများ၏စဉ်ဆက်မပြတ်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြောင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိလိမ့်မည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အရောင်းစျေးကွက်၏အချိန်ကာလကွဲပြားခြားနားသောထုပ်ပိုးပုံနှိပ်ခြင်းစည်းမျဉ်းများ, ပုံနှိပ်စက္ကူ, အပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာပြောင်းလဲမှုရှိသည်, စက်ယန္တရားများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများတိုးတက်လာအမြန်ဆုံးအရောင်းစျေးကွက်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါတယ်။
မင်းနားလည်လား? “ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော” စကားလုံးသည်ဖောက်သည်များ၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်နက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်နေပြီး၊ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းသည်ယနေ့ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ပိုမိုကိုက်ညီသည်။
အင်တာနက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လူသားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတိုးတက်လာခြင်းတို့ကြောင့်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းများများပြားလာသည်နှင့်တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာခဲ့သည်။ တစ် ဦး ချင်းစီကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်အတွက်သုံးစွဲသူများသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံသဏ္inာန်၌ရှိနေစဉ်မိမိကိုယ်ပိုင်ကုန်ပစ္စည်းများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်လိုကြသည်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးခြင်း, ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်လူသား၏ပြissueနာတစ်ခုဖြစ်စေခြင်းငှါ, လူတစ် ဦး မှလူတစ် ဦး မှလုံးဝကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီများသည်ဖောက်သည်များအား ၄ င်းတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အတွေ့အကြုံဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသင့်သည်။
ရိုးရာ + ကြီးမားသောဒီဂျစ်တယ်ထုပ်ပိုးခြင်းပုံနှိပ်ခြင်းသည်လမ်းကြောင်းအသစ်ဖြစ်လာသည်
ကမ္ဘာအနှံ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်း၏ရလဒ်များအရလက်ရှိတွင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိစီးပွားဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုထုပ်ပိုးပုံနှိပ်ကုမ္ပဏီများ၏ ၈၅% သည်ကြီးမားသောဒစ်ဂျစ်တယ်ထုပ်ပိုးပုံနှိပ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ စီးပွားဖြစ် ၀ န်ဆောင်မှုထုပ်ပိုးခြင်းပုံနှိပ်ကုမ္ပဏီများမှ ၃၁% က ၂၅% ကျော်ကပြောကြားခဲ့သည်။ ကြီးမားသောဒစ်ဂျစ်တယ်ထုပ်ပိုးခြင်းပုံနှိပ်ခြင်းမှအဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှရရှိသော ၀ င်ငွေ။ ဒီဂျစ်တယ်ထုပ်ပိုးခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရောင်းချမှုစျေးကွက်သည်အမြဲတမ်းတိုးတက်နေသည်ဟုလူတိုင်းအားအသိပေးရန်“ အဝတ်အချည်းစည်း” ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်လက်ရှိအဆင့်တွင်တရုတ်နိုင်ငံရှိဒစ်ဂျစ်တယ်ထုပ်ပိုးပုံနှိပ်ခြင်းသည် ၁% မျှသာရှိသည်။ သို့သော်ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်ပိုင်စိတ်ကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများတိုးတက်ခြင်းတို့ကြောင့်ရိုးရာပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်များသည် မြင့်တက်လာသဖြင့်ဒီဂျစ်တယ်ထုပ်ပိုးခြင်းပုံနှိပ်ခြင်းနည်းပညာသည်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့နည်းပညာမှတိုးတက်လာသည်။ အောက်ပါအချိန်ကာလ၌ကြီးမားသောဒစ်ဂျစ်တယ်ထုပ်ပိုးခြင်းပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုအမျိုးမျိုးသောပုံနှိပ်စက်ရုံများသို့မိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အရောင်းစျေးကွက်၏ပြောင်းလဲနေသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်, ဒီဂျစ်တယ်ထုပ်ပိုးပုံနှိပ်ခြင်းတိုးမြှင့်ဖို့ရိုးရာထုပ်ပိုးပုံနှိပ်ခြင်းအရေအတွက်။
အင်တာနက်နည်းပညာကိုလည်ပတ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုတို့တွင်ကြား ၀ င်ပါစေ
အီလက်ထရွန်နစ်ကူးသန်းရောင်း ၀ ယ်ရေးလုပ်ငန်းသည်အင်တာနက်နည်းပညာကိုကောင်းစွာနားလည်ထားသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအော့ဖ်လိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များအပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းစက်ရုံများသည်စျေးကွက်ရောင်းဝယ်မှုနယ်ပယ်ကိုတိုးချဲ့ရန် e-commerce ကို အခြေခံ၍ အွန်လိုင်းစတိုးများဖွင့်လှစ်ရန်ပြိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊ ဖောက်သည်များကြားဆက်ဆံရေးထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီ၏အမြတ်အစွန်းများအရသူတို့သည်ပြောင်းလဲမှုများကိုပိုမိုတိကျမှန်ကန်သောပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်ဒေတာများကိုအမြဲတမ်းမှီခိုနေရသည်။
ကျနော့်အမြင်အရဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းဟာလာမယ့်ငါးနှစ်အတွင်းမှာသာတိုးပွားလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းစက်ရုံများစွာသည်သူတို့၏ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရွှေ့ပြောင်းကြလိမ့်မည်။ ဤအတောအတွင်းသူတို့သည်အချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ၏စိတ်ဓာတ်ဖြင့်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်စျေးကွက်တင်ရန်ကြီးမားသောအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုကြလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့်အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကို ရယူ၍ အွန်လိုင်းလိုင်းများကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းသည်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းကုမ္ပဏီများအတွက်လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဦး တည်ချက်ရှာရန်အတွက်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးရာတွင်များသောအားဖြင့်အသုံးပြုသောလူမီနီယံ plating film ကိုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားသည် CPP aluminium plating, PET aluminium plating သို့သော်လူမီနီယံ plating film ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်များစွာသောထုပ်ပိုးလုပ်ငန်းများကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်လူမီနီယံ plating လွှဲပြောင်းဖြစ်ရပ်ဆန်းပေါ်လာဖို့လွယ်ကူသည် , ဒီစက္ကူ, စာအုပ်ချုပ်သမား၏အချက်အနေဖြင့်, လူမီနီယံ plating ရုပ်ရှင်လွှဲပြောင်းကာကွယ်တားဆီးဖို့ကွဲပြားခြားနားသောဖြေရှင်းချက်ရှေ့ဆက်။
1. Two-component တစ်ခု polyurethane ကော်
ညံ့ဖျင်းသောသာမန်ကော်အရည်ပျော်ပစ္စည်းနှင့်ကော်သည်အလူမီနီယမ်အလွှာကိုအလွယ်တကူကူးစက်နိုင်သည်၊ အလွိုင်းအလွှာ၏အမြန်နှုန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်၊ ရလဒ်မကောင်းလျှင်စုပေါင်းခြောက်သွေ့သည်၊ အရည်ပျော်ပစ္စည်းအကြွင်းအကျန်များလွန်းသည်။ သင့်လျော်သောမော်လီကျူးအလေးချိန်ကောင်းမွန်သောအရည်ပျော်ရည်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ မြင့်မားသော viscous force ရှိသောအလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအဖုံးသည်အထူးကော်များမဟုတ်ပါ။
ကော်ပမာဏသည်ကြီးမားသည်၊ ခြောက်သွေ့စေသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်လွယ်ကူခြင်းမရှိသောကြောင့်ကော်သည်အလူမီနီယမ်အပေါ်ယံလွှာကိုစုပ်ယူနိုင်ပြီးကုသချိန်ကိုလည်းတိုးချဲ့နိုင်သည်။ အလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသွင်ပြင်ကူးပြောင်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုအလွယ်တကူတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကော်ပမာဏကိုထိန်းချုပ်သင့်သည်။2~ 2.5g အတွက်အထွေထွေထိန်းချုပ်မှု၏အတွေ့အကြုံအရသိရသည်သင့်လျော်သောအနေအထားတွင်။
ကော်အလွှာ၏ပျော့ပျောင်းမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး၊ ကုသခြင်းကိုလျှော့ချရန်အသုံးပြုသောအလူမီနီယံအပေါ်ယံလွှာလွှဲပြောင်းခြင်းကိုထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်သည်။ ဤအခြေအနေကိုအလင်းထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏အစွမ်းသတ္တိလိုအပ်ချက်များကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ ဒီနည်းလမ်းကိုမသုံးဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှ။
အလူမီနီယမ်ရုပ်ရှင်ပေါင်းစပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ခြောက်သွေ့သောလမ်းကြောင်း၏ခြောက်သွေ့သောအပူချိန်ကိုသင့်လျော်စွာတိုးမြှင့်သင့်သည်၊ ဥပမာအားဖြင့် ၅-၁၀ ဒီဂရီအထိတိုးမြှင့်ပြီးအထက်5မီတာ / s လေတိုက်နှုန်းကိုသေချာစေသင့်သည်၊ အရည်ပျော်ရည်ကိုပိုမိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဖြစ်စေရန်၊ ကျန်ရှိသောအမြင့်အပြင်အမြင့်လိုင်းလိုင်းကိုလည်းသုံးနိုင်သည်မြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်ယံပိုင်းလည်းနိုင်ပါတယ်။
၅) ကုသခြင်းအပူချိန်ကိုမြှင့် တင်၍ ကုသချိန်ကိုတိုစေပါ
အလူမီနီယမ်ဖလင်ပြားပေါင်းစပ်ထုတ်ကုန်များသည်ကုသခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်သင့်လျော်သောသင့်လျော်သောအပူချိန်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ဆေးကြောချိန်ကိုတိုစေခြင်း၊ ထို့ကြောင့်အလူမီနီယမ်အပေါ်ယံလွှာပျက်စီးခြင်း၏ထိုးဖောက်မှုကိုလျှော့ချရန်၊ အလူမီနီယံအပေါ်ယံလွှာလွှဲပြောင်းခြင်းကိုထိရောက်စွာတားဆီးရန်၊ , ၂၄ နာရီအတွင်းသို့မဟုတ်ဤနည်းဖြင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကုသခြင်းကိုရှောင်ပါ။
2. ရေ -based ကော်
၁) ပေါ့ပါးသောကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးခြင်း၊ မာနထောင်လွှားသောအစားအစာ၊ ချက်ချင်းခေါက်ဆွဲနှင့်အခြားထုတ်လုပ်မှုများ၊ CPP လူမီနီယံသတ္တုပြားအတွက်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများသည်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်၊ တစ်ခုတည်းသောအစိတ်အပိုင်းများမှရေဖြင့်သုံးသောကော်များတွင်အများဆုံးအသုံးပြုမှုအတွက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် နှစ်ပေါင်း, မှင်လွှဲပြောင်း၏ပြproblemနာနှင့်ပေါ်တူဂီအခွံအစွမ်းသတ္တိကို 1 ON / 15 မီလီမီတာကျော်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်ပြီးနောက်, အမှန်တကယ်စမ်းသပ်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ချိန်တည်းမှာ, အလူမီနီယမ်လွှဲပြောင်း၏ပြhaveနာပေါ်ပေါက်လာပြီထုပ်ပိုးထုတ်ကုန်များ၏ဤအမျိုးအစားများအတွက်စံတွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါတယ်။
၂) အလူမီနီယံထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်ရေအခြေခံကော်ဖြင့်အသုံးပြုပါ။ aniline roller သည်လိုင်း ၂၀၀ ခန့်ကိုအသုံးပြုသည်။ ကော်ပမာဏကို ၁.၂ ~ ၁.၈ ဂရမ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ တစ်သျှူးမျှင်ပမာဏကိုသေချာစေရန်၊ ကောင်းမွန်သောခြောက်သွေ့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ အချို့သောအတိုင်းအတာအထိကုန်ကျသော်လည်း၊ အရည်ပျော်ပစ္စည်းအကြွင်းအကျန်များ၏ပြproblemနာကိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းနိုင်ရန်၊ ဖောက်သည်များ၏ပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုကိုသေချာစေရန်၊ အရည်ပျော်ပစ္စည်းအကြွင်းအကျန်အလွန်အကျွံဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများရှိပါကနှောင်းပိုင်းတွင်လျှော့ချပါ။ ။